2019 November Archive | Dhamma Training Center
12. Āsevana Paccaya, Dhamma Notes, General
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) Roman Pali and English (1 of 10) Āsevanapaccayo Paccayaniddeso Āsevanapaccayoti – purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Purimā purimā kiriyābyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (2 of 10) (ပါဠိ၊ မြန်မာပြန်) zawgyi ၄၂၆။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာသေ၀နပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကိုသိုလ်တရားအား အာသေ၀နပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ အာသေ၀နပစ္စယေန ပစ္စယော။ ရှေးရှေး၌...
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (3 of 10) Doing something again and again. (က-၁) အာ = အထပ်ထပ်အခါခါ သေ၀န= ထုံမွမ်းသည်၊ ပွားများသည်။ ဇောတစ်ခုက ထိုဇောမျိုး ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်စေသည်။ ပမာအားဖြင့် ရှေ့ကုသိုလ်ဇောက နောက်နောက် ဇောကို ကုသိုလ်ဖြင့် အထပ်ထပ် ထုံမွမ်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ (က-၂) Repetitive condition = အာသေ၀နပစ္စည်း။ ‘အာသေ၀န စ ဗာလာနံ’၌ အာသေ၀န...